Ny tanjaky ny NPMA dia misy amin'ny fahafahantsika mampivondrona ireo mpilalao fototra rehetra amin'ny fitantanana peste isan-taona ao amin'ny PestWorld. Satria hetsika indostrialy fitantanana peste lehibe indrindra eran'izao tontolo izao dia tsy misy sehatra tsara kokoa ho anao handefasana serivisy sy vokatra vaovao ary fampiroboroboana ...Hamaky bebe kokoa »
Telex Environmental Trading Co., Ltd. (Sampana Jinglong) dia niditra ho mpikambana ao amin'ny NPMA.
Miaraka amin'ny fivoaran'ny Jinglong, ny compapy dia eken'ny mpanjifa marobe manerantany. Fotoana mety izao hifindrana hatrany! Jinglong (Telex) dia ho eto foana isaky ny mila izany ianao! Hamaky bebe kokoa »
Tongasoa amin'ny fihaonana amin'i Jinglong ao amin'ny FAOPMA 2019. Hisy vokatra vaovao hivoaka. Ireto ambany ireto ny fampahalalana momba ny trano rantsan-kazo: Booth: A06 Daty: 24 (Tue) - 26 (Thu) Septambra, 2019 Toerana: Efitrano fampiratiana 1F, DCC (Ivotoerana Fivoriambe Daejeon), Daejeon, Korea Hamaky bebe kokoa »
Fampirantiana ao amin'ny PestEx 2019
Ny fikambanam-piaraha-miasa famonoana bibikely lehibe indrindra any Angletera izay misolo tena ny orinasa 700 mpikambana ary mifandray amin'ny Affiliate 3.000. Ny hetsika dia avoakanay ao amin'ny magazine indostria misahana ny famonoana bibikely, ary koa ireo sehatra maro mifandraika amin'izany. Hamaky bebe kokoa »
Ny andiany faha-6 amin'ny fampirantiana Pest Italia Pest Control dia hatao ny 06 sy 07 martsa 2019 ao amin'ny Milan Convention Center (MiCo 1st floor) ora malaza: Alarobia Martsa 06th 2019 manomboka amin'ny 9.00 maraina ka hatramin'ny 6.00 hariva Alakamisy 07 martsa 2019 manomboka amin'ny 9.0 ...Hamaky bebe kokoa »
Mandraisa anjara amin'ny Parasitec Paris 2018 30 aogositra 2018
Ny toerana vaovao dia laboratoara tsara indrindra ho an'ireo orinasan-tseranana sy mpaninjara. Miaraka amin'ireo mpandraharaha matihanina sy mpanamboatra avy amin'ny firenena 30 eo ho eo, ny Parasitec Paris, izay nahitana mpitsidika maherin'ny 2.800 nandritra ny fihaonambe farany teo, dia mbola manondro hatrany ...Hamaky bebe kokoa »
Konferansa momba ny fiarovana sy ny kalitao iraisam-pirenena any Sina 2018
Nandritra izay 11 taona lasa izay, ny fihaonamben'ny CIFSQ dia nahasarika olona matihanina mihoatra ny 8.000 ho fiarovana sy hanina avy amin'ny firenena 30+. Manantena ny fandraisana anao izahay amin'ny taona 2018. Manatrika ...Hamaky bebe kokoa »
Izahay dia manao fampirantiana ao amin'ny FAOPMA 2018 amin'ity volana septambra ity
Ny Fikambanan'ny Fikambanan'ny mpitantana Pest Managers asie sy Oceania dia fikambanana tsy mitady tombom-barotra naorina tamin'ny 1989 avy amin'ny mpikambana avy amin'ny firenena aziatika sy ranomasimbe mba hampiroborobo sy hampivelatra ny indostrian'ny fitantanana areti-mifindra manerana ny faritra. ...Hamaky bebe kokoa »